The Ab Presents Nepal » विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा काठमाडौं उपत्यका, खतराको सूचीमा पर्नु लाजमर्दो !
विश्व सम्पदाको खतराको सूचीमा काठमाडौं उपत्यका, खतराको सूचीमा पर्नु लाजमर्दो !
काठमाडौं -: खतरामा परेको सम्पदाको सूचीमा काठमाडौं उपत्यका सुचीकृत भएको छ । सन् २०१९ का लागि युनेस्कोको उत्कृष्ट गन्तव्य र खतरामा परेको सम्पदाबारे सार्वजनिक सूचीमा काठमाडौं उपत्यका खतामा परेको सम्पदाको सूचीमा परेको हो ।
काठमाडौंलाई स्मार्ट शहर बनाउने दाबीसहित जनप्रतिनिधिले लोकप्रीय भाषण गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उपत्यका खतराको सूचीमा पर्नु लाजमर्दो विषय बनेको छ । उपत्यकामा अव्यवस्थित शहरीकरण, आधुनिकिकरणका नाममा परम्परागत निर्माण र अभ्यासमा आएको कमीले खतराको सूचीमा परेको हो ।
‘परम्परागत घर निर्माणमा आएको कमीलगायतका कारणले स्थानीय संस्कृति जोखिममा परेको छ’ ।’ काठमाडौं उपत्यकासहित बँगलादेशको सुन्दरवन, बुल्गेरियाको प्राचीन शहर नेसेबार, अल्बानियाको अरिड क्षेत्र, मेक्सिकोको गल्फ अफ ‘क्यालिफोर्निया र इराकको प्राचीन शहर बेबिलोन खतरामा परेका सम्पदाहरुको सूचीमा परेका छन् ‘।
‘विश्व सम्पदामा परेकामध्ये नेपालका कुनैपनि स्थान गन्तव्य क्षेत्रको मनोनयनमा परेका छैनन् ।’ भारतको राजस्थान शहर गन्तव्य शहरको सूचीमा परेको छ’ ।